खाना खानसाथ गरिने यस्ता कार्य कति घातक ? - How deadly such work is done by eating food? -
How deadly such work is done by eating food?
स्वस्थ्य जीवनका लागि के गर्ने ? अक्सर हामी यसैको खोजीमा हुन्छ । स्वस्थ्य र तन्दुरुस्तीको लागि सन्तुलित खानेकुरा सेवन गर्छौ, व्यायाम गर्छौ, योगा गर्छौ, स्वस्थ्य परीक्षण गर्छौ । तर, यसले मात्र पुग्दैन । कतिपय सामान्य आनीबानीले पनि हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर गरिरहेको हुन्छ । जस्तो कि, खाना खाने शैली, नुहाउने तरिका, हिँड्ने, सुत्ने, बस्ने ।
केवल स्वस्थ्य खानेकुराले मात्र स्वास्थ्य राम्रो हुने होइन, त्यसपछि गरिने क्रियाकलाप पनि यसमा जिम्मेवार हुन्छ । खानाको पुरा फाइद हामीलाई त्यहीबेला मिल्छ, जब पाचन प्रक्रिया सहि हुन्छ र खानाको सबै न्यूटि्रएन्ट्स हाम्रो शरीरले ग्रहण गर्छ ।
धेरैजसो अवस्थामा हामी खाना खानसाथ केहि क्रियाकलाप गर्छौ? जसले पाचन प्रक्रिया र स्वस्थ्यमा असर पर्छ । यस्तोमा कतिलाई जिज्ञासा पनि हुन्छ कि, खाना खाएपछि के गर्नुपर्छ, के गर्नु हुँदैन ?
स्वस्थ्य जीवनको लागि स्वस्थ्य दिनचर्या पालना गर्नुपर्छ । यसमा कस्तो खाने भन्ने मात्र होइन, कसरी खाने भन्ने कुराले अर्थ राख्छ ।
प्रश्न- खाना खानसाथ हिँड्नु हुन्छ ?
प्रश्न- खाना खाए लगत्तै चिया पिउनु हुन्छ ?
प्रश्न- खाना खानसाथ फलफूल सेवन गर्न सकिन्छ ?